imali Swedish | swedish currency.net A guide to buy foreign currency for goods and services exports
imali Vehicle Converter
Home imali Swedish RSS
Imali Swedish(krona) ibe ingqekembe ye eSweden ukususela 1873. Kokuba ekhutshwe ebhankini yesizwe Swedish, Sveriges Riksbank. NgesiNgesi, le ngqekembe kungafane yayibhekisela njengoko isithsaba Swedish (Krona kuthetha isithsaba in Swedish). Enye krona yahlulwe yaba 100 idenariyo. lyo, zonke Ore ngqekembe achithwa ngo Septemba 30, 2010. Iimveliso nangoku elithelekelelwayo Ore, kunjalo xa ubhatala imali yonke yesixa luhlengahlengiswe ukuze krona ekufuphi. Coins ngoku ifumaneka ngenxa yokusetyenziswa 1 krona, kwaye 5 kwaye 10 izithsaba. Ezikulemali categories 20, 50, 100, kwaye 500 izithsaba.
WaseSwiden bafeza yindlela amahle ebomini, ngenxa yo ishishini labucala ngohlangothi, eziluncedo zoluntu, ngesikhokelo nokusasazwa phambili, kunye namandla umsebenzi kakhulu abanetalente. Uqoqosho ngamandla imi kutshintshiselwano ngaphandle, usebenzisa isiseko asethi lwemithi, umbane, kwezimbiwa intsimbi. Unxunguphalo ehlabathini zemali 2008 umdla imali yehla nokusetyenziswa, ekuzalisekisweni uqoqosho yaseSweden ukuba bathubeleze kokurhoxa nangona imali yayo eqinileyo essentials ezisisiseko. ngamagcisa makalumke Solid sifakwe ukunxiba eqinileyo emva konyaka 2010 ukuze 2011.
Lwemali yaseSweden lwanikelwa 1873, yobutyebi le Riksdalersgatan. Imali leyo inikelwe yoko le yaseScandinavia Monetary Union kunye eNorway Denmark, eyayihleli behamba de kweMfazwe Yehlabathi. iintlobo emali phantsi esisibambiso babephantsi eyona inqanaba nomgangatho. IGqiza Union begqibile umsi-up kweMfazwe Yehlabathi I ngowe 1914. Sweden kwiNgxowa nqanaba liphezulu quality ngoAgasti 2, 1914, kwaye ngaphandle isikali ngabafazi wawutshintsha Union bafika esiphelweni.
xa esisibambiso, ESweden kufuneka ukuba bajoyine i-Eurozone kunye wayengumngeni ngokusebenzisa Euro. Ukuba kunjalo, uninzi Swedes zichase kokufumana coin.On September 14, 2003, amahlanu anesithandathu ekhulwini lwabavoti yalungisa ngaphandle kubacekisa kokufumana Euro. Bebeyisebenzisa escape clause, urhulumente waseSwiden uyichole ukuba azibandakanye ERM II, ibeke kokufumana Euro.